Somaliska — Hela Sverige Rullar
HSR i media
Is-fidinta dalka Iswiidan oo idil ka jirta
Waa urur dhallinyarada dalka ku cusub u suura geliya, in ay bartaan habka lo ciyaaro ciyaaraha skateboard
SIBIIXBIXADA CIYAARAHA SKATEBOARD
Sibiixbixada ciyaaraha skateboard waa ciyaaro aan lahayn nidaam, saacado u go’an ama goobo u gaar ah. Qofku wuxuu qalabka ku sibiixbixi kara qalabka markii u doono, sida u doono iyo halka u doono. Qofku wuxuu qalabka ku sibiixbixi kara keligiisa ama wadajir saaxiibadiisa.
Sibiixbixada ciyaaraha skateboard waxay yeelan kartaa qaab tababar, qaab noolaleed ama qaab u qofku shaqsiyadiisa ku muujinaayo. Qofku wuxuu sameeynayaa awooda dhelitirnimada, iskuwida iyo xooogsaarka. Tan kale, waa ciyaar laga helo.
Qofku wuxuu u baahan yahay oo keliya kaabad iyo kabo kaddib sidii u rabo ayuu u sibiixbixi karaa. Jidka ama ragaadda ciyaaraha skateboard.
RAGAADDA CIYAARAHA SKATEBOARD
Tani waa qodob katirsan sibiixbixada ciyaaraha skateboard oo aad looga helo, wuxuuna ku habboon yahay qofka barbaraha ah iyo qofka ciyaaraha xariif ku ah. Qofku marna horey ayuu ragaadda isugu fidinayaa marna gadaal isagoo isla markaas geesaha ragaadda xeelado ka sameeynaayo. Kumanyaal xeelo oo kala duwan ayaa la sameeyn karaa. Sidaas awgeed, marna lagama xiisaayo xeeladaha.
WAA MAXAY HAWLGALKAYGA?
Waxaan aagga hoyga magangelyo-dooneyaasha ka dhisnaa ragaadda ciyaaraha. Markii dhismaha ragaadda ay dhamaadaan waxaa deqsi ahaan hoyga la siiyaa xeelado iyo koofiyadaha birta ah. Sidaas ayaa loo suurageliyaa fursadda barashada sibiixbixada. Taasoo qof kasta u suurtagelinayso in uu sida u doono u isticmaalo ragaadda iyo kaabadaha. Qofkii doonaayo wuxuu heli karaa qof ah bareha ciyaaraha skateboard, kaasoo toddobaadkii hal maalin goobta laga helo oo laga barto sida sibiixbixada.
Goobta ragaadda waa goob dadwaynaha ka dhaxeeya, waxaana la rajeynayaa in dhallinyarada dalka iyo kuwa dhowaan dalka yimi wadajir ragaadda u adeegsadaan.
WAA MAXAY SABABTA ADEEGAAN?
Anagu waxaan aaminsan nahay in sibiixbixada ciyaaraha skateboard ay tahay madadalo noolasha aadenaha muhim u ah. Haddii ciyaarahan aan ciyaarno waxaan helaynaa fursad aan saaxiibo cusub ku yeelanno iyo tababar wanaagsan. Tan kale, ciyaaraha noocan ah waxay ku hilmaan siinayaan dhibaatooyinka noolasha. Isboortiga wuxuu noo suura geliyay wadajirnimmo. Ujeedadeenna waxay tahay in aan sare u qaadno tirada dhallinyarada xiiseeya ciyaaraha noocan ah. Waxaanu rajeynaynaa in sibiixbixada ciyaaraha skateboard noqoto wax aadenaha u sahlisa sidii dalka ugu heli lahaayeen oona ula qabsan lahaayeen dalkooda cusub.